नरसिंह चौधरीः भारतका नागरिक, नेपालका सांसद, राजेन्द्र महतोले यसरी बनाइदिए सांसद - Dainik Nepal
नरसिंह चौधरीः भारतका नागरिक, नेपालका सांसद, राजेन्द्र महतोले यसरी बनाइदिए सांसद
दैनिक नेपाल २०७४ जेठ ५ गते १५:००
काठमाडौं, ५ जेठ । छिमेकी देश भारतका नागरिक नेपालमा सांसद र मन्त्री बनेको कुरा नेपाल नेपालीका लागि कुनै नौलो कुरा त होइन् । भारतको नागरिकता त्यागी अंगीकृत नेपाली नागरिकता लिएर विगतदेखि नै भारतीयहरु नेपालमा सांसद र मन्त्री बन्दै आएका छन् ।
तर, भर्खरै एउटा नयाँ तथ्य बाहिर आएको छ । अंगीकृत नागरिकता लिएर सांसद र मन्त्री बन्दै हाल प्रधानमन्त्रीसहित राष्ट्रप्रमुख बन्न पाउनुपर्ने माग गर्दै विभिन्न समयदेखि आन्दोलन समेत गरिरहेका भारतबाट आएका अंगीकृत वर्चश्व रहेको मधेसवादी दलबाट सिधै सांसद बन्ने गरेको तथ्य बाहिर आएको हो ।
यसको नेतृत्वको तत्कालिन सदभावना पार्टी र अहिलेको राजपा नेपालका शीर्ष नेता राजेन्द्र महतोले गरिरहेका छन् । महतोमाथि स्वयं उनी भारतबाट आएको अंगीकृत नेपाली नागरिकको आरोप लाग्ने गर्छ । उनले पहिला आफूले नेपालको नागरिकता लिएको र पछि आफ्ना बाबुलाई दिलाएको खबरहरु बेला बेला आउने गरेका छन् । तर, यसपटक हामीले उनीमाथि लाग्ने यी आरोपलाई बल पुग्ने खालको तथ्य फेला पारेका छौं । कुरा हो सांसद नरसिंह चौधरीको । जो तत्कालिन सदभावना र अहिलेको राजपाका समानुपातिक सांसद हुन् । उनलाई राजेन्द्र महतोले नै सांसद बनाइदिएका हुन् । सांसद बनाउँदा पैसाको ठूलो चलखेल भएको स्रोतको भनाई छ ।
को हुन नरसिंह चौधरी ?
भारतको उत्तरप्रदेश प्रान्तको बलारामपुर जिल्ला भगवानपुर खादर गाउँ ब्लक एस २४ घर भएका नरसिंह चौधरी केही समययता नेपालमा राजनीति गर्दैछन् । उनका बुवा अहिले पनि सोही गाउँमा बस्छन् । उनका बुवाको नाम रामचन्द्र चौधरी हो । रोचक कुरा त के छ भने नरसिंहसँग अहिले पनि भारतको नागरिकता छ । नेपालको त हुने नै भयो किनकि नागरिकता भएरै उनी सार्वभौम नेपालको व्यवस्थापिका संसदको सदस्य नियुक्त भएका छन् । उनले कपिलवस्तुबाट नेपालको नागरिकता लिएका थिए । अर्काे कुरा नरसिंहको भारतीय निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावलीमा अहिलेपनि नाम छ । यतिसम्मकी २०१७ (भर्खरै) उत्तर प्रदेशमा भएको चुनावको मतदाता नामावली सूचीमा समेत उनको नाम छ, जसले उनी अहिले पनि भारतीय नागरिक र मतदाता हो भन्ने पुष्टि गर्दछ । २००९ को पञ्चायत चुनावका बेला उनीसहित पुरै परिवारको नाम मतदाता नामावली सूचीमा पाइन्छ । उत्तर प्रदेशको ‘पञ्चायत निर्वाचक नामावली २००९’ को १११३ नम्बरमा उनको नाम छ । उनका बुबा रामचन्द्रको ११११मा नामावली छ ।
नेपालको संविधानअनुसार अंगीकृत नागरिकता लिएको १० वर्षपछि मात्रै राजनीति तथा सार्वजनिक पद धारण गर्न पाउने प्रावधान छ । तर, नरसिंह त भारत र नेपालको साँझ नागरिक भई नेपालको सांसदसम्म हुन सफल भए । उनलाई यहाँसम्म पुर्याउने माध्यम पैसा बन्यो भने पुर्याउने व्यक्ति राजेन्द्र महतो बने । महतोलाई न त संविधानले रोक्यो नत कानूनले नै । मधेसी दल र आन्दोलनको आडमा एउटा भारतीय नागरिकलाई सिधै नेपालको सांसद बनाइदिएर छाडे । अर्काे कुरा नरसिंहका छोरा वृजेन्द्र यादव रुपन्देहीमा बस्छन् । उनी पेट्रोलियम व्यवसाय गर्छन् । नाकाबन्दीको समयमा उनी तेल तस्करी गर्दागर्दै पक्राउ परेका थिए ।
नेपालको अंगीकृत नागरिक लिएर थुप्रै भारतीय नागरिक सांसद र मन्त्रीसम्म बनेपछि भारतको नागरिकता परित्याग नगरिकनै नेपालको नागरिक लिएर सिधै सांसद बन्नु यो एउटा सार्वभौम राष्ट्रमाथिको ठाडो हस्ताक्षेप हो । यसले दिर्घकालमा देशलाई अप्ठेरो स्थितीमा धकेल्ने निश्चित छ । त्यसकारण यस प्रकरणमा अनुसन्धान गरिनुपर्छ । र, यस्तो प्रवृतिलाई निरुत्साहित पार्नुपर्छ ।
के भन्छन् नरसिंह ?
यस्तो तथ्या फेला परेपछि नरसिंह सम्पर्क गर्दा उनले आफ्नो बुबाले भारतमा जग्गा किनेको स्वीकार गरे । ‘धेरै वर्ष पहिला नै मेरो बुबाले उत्तर प्रदेशको भगवानपुरमा जग्गा किन्नुभएको थियो,’ उनले केही तथ्य लुकाउँदै भने, ‘त्यसैले मेरो बुबाको नामावली त्यहाँ भयो होला तर म कपिलवस्तुको सिमेरी माझेर सिसवा वाड नम्बर–६ मा जन्मेको हुँ ।’
तपाईको मतदाता नामावली पनि उत्तर प्रदेशमै रहेछ नि ? भन्ने प्रश्नमा भने उनले गोलमोटोल प्रतिक्रिया दिए । ‘मेरो बाजे–बराजु नै नेपालमा जन्मिनु भएको हो,’ उनले भने, ‘मेरो सबै नागरिकता नेपालकै छ ।’ उनले आफूले अध्ययन भारतकै लखनउ गरेको पनि स्वीकार गरे । यद्यपि २०३६ सालदेखि नै नेपालमै बसेर वकालत गरेको उनको दाबी छ ।
सर्वाेच्चको आदेशले छुटेका वडा अध्यक्ष तामाङ फेरि पक्राउ
स्थापना दिवसकै दिन फुट्यो राजपा नेपाल, उपाध्यक्ष यादवको नेतृत्वमा नयाँ पार्टी घोषणा (भिडियोसहित)
ओली–प्रचण्ड छलफल सकियो, यसो भन्छन् प्रचण्ड
नेपाल पत्रकार महासंघमा तालाबन्दि
‘महानायक’ राजेश हमाल ‘छोराको बाबु’ बने